नेपालमा वयस्क, वृद्धवृद्धासँगै बालबालिकामा पनि थाइराइडको जोखिम, लक्षण पहिचान गरेर निवारण खोज्ने कि ? – Mission Khabar
नेपालमा वयस्क, वृद्धवृद्धासँगै बालबालिकामा पनि थाइराइडको जोखिम, लक्षण पहिचान गरेर निवारण खोज्ने कि ?
मिसन खबर ६ कार्तिक २०७५, मंगलवार १२:०२
काठमाडौं– थाइराइडको समस्या प्रायः वयष्क उमेरका मानिसमा देखिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यो समस्या युवा, वयस्क र वृद्ध वृद्धामात्रै नभएर १८ वर्ष मुनिका बालबालिकामा समेत देखिन थालेको छ ।
थाइराइडको समस्याले सबै उमेर समूहलाई गाँजेपनि किन हुन्छ, धेरैलाई थाहा छैन । नेपालमा थाइराइड सम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित हुनेको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ । चिकित्सकहरु भने अटो इम्युन समस्या तथा खानामा आयोडिनको मात्रा धेरै हुँदा नेपालमा थाइराइडको समस्या बढेको बताउँछन् । खानामा हुने आयोडिनको अधिक मात्राले थाइराइड ग्रन्थी भत्काएपछि थाइराइडको समस्या देखापर्छ ।
आयोडिनको कमी, थाइराइडको संक्रमण, विभिन्न किसिमका औषधीको प्रयोगबाट पनि थाइराइडको जोखिम बढ्ने चिकित्सक बताउँछन् । शरीरमा हर्मोनको उत्पादन बढी भई हाइपर थाइराइडिज्मको समस्या भएमा २० देखि ३० वर्ष उमेरका महिलामा थाइराइडको समस्या देखिने र हर्मोनको कमी भएर हाइपोथाइराइडिज्मको समस्या भए ४०–५० वर्ष उमेर कटेका महिलामा जोखिम रहनेगर्छ । अटो इम्युनको समस्याले पनि थाइराइडको सम्भावना उच्च हुने हुने विज्ञहरु बताउँछन् । भाइरल रोगको संक्रमण, औषधीको सेवन, घाँटीमा रेडिएशन थेरापीको प्रयोगका कारण पनि थाइराइड हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।
नेपालमा थाइराइडबाट संक्रमित बालबालिकाको यकिन तथ्यांक नभएपनि पछिल्लो समय एकदेखि दुई प्रतिशत बालबालिका तथा अठार वर्ष नाघेका करिब चार प्रतिशत वयष्कमा थाइराइडको समस्या रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
समयमै उपचारद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिने थाइराइड हुँदैमा आत्तिहाल्न नपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि खासै असर नगर्ने थाइराइडको पहिचान ढिलाई भएमा बाँझोपना हुने तथा गर्भ तुहिने जोखिम बढ्छ । यसको लक्षण देखा परेपछि एक पटक थाइराइडको परीक्षण गराउन चिकित्सकको सुझाब छ । थाइराइड कुनै रोग नभएर घाँटीमा हुने एक प्रकारको ग्रन्थी हो । यो ग्रन्थीबाट थाइराइड हर्मोन उत्पादन हुन्छ, जसले शरीरलाई ताकत प्रदान गर्छ । तर कुनै कारणवस थाइराइड ग्रन्थीमा समस्या भएमा यो समस्या बन्ने गर्छ ।
थाइराइड हाइपर थाइराइडिज्म (हर्मोन कमीको समस्या) र हाइपो थाइराइडिज्म (हर्मोन बढी हुने समस्या) गरी दुई प्रकारको हुन्छ ।
थाइराइइडको लक्षण रोग अनुसार फरक–फरक हुन्छ । शरीरमा हर्माेनको कमीका कारण हाइपोथाइराइडिज्म समस्या भएमा शरीरमा इनर्जी दिने हर्मोन को कमी हुने गर्छ । जसले गर्दा शरीर कमजोर हुने, थाक्ने गल्ने, काम गर्न जाँगर नचल्ने, छाला फ्रुुस्रो हुने, जीउ सुन्निने, तिव्र गतिमा तौल बढ्ने, गर्मी तथा चिसो छिट्टै महसुस हुने, कब्जियत हुने, अनिद्रा, कपाल झर्ने लगायतको समस्या देखिन्छ । यो लक्षण जोखिम समूहका जोसुकैलाई देखिएपनि महिलामा बढी हुन्छ । शरीरमा हर्मोनको मात्रा धेरै भएमा यसको लक्षण पनि ठीक उल्टो हुन्छ । जतिबेला शरीर दुब्लाउँदै जाने, हातखुट्टा काफ्ने, धेरै पसिना आउने, शरीर तात्ने, दिशा लाग्ने समस्या देखापर्छ ।
थाइराइडको उपचार रोग अनुसार फरक हुने हुँदा सबैभन्दा पहिले कारण खोज्नुपर्छ । अटो इम्युनका कारण थाइराइडको समस्या भएमा यो रोग निको हुँदैन । भाइरस संक्रमणका कारण थाइरोडाइटिस् भएका ८० प्रतिशत व्यक्तिको समस्या आफैं निको हुन्छ । यसैले समस्या किटान भएपछि उपचार सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्य कारणबाट भएको थाइराइडको हकमा भने चिकित्सकको परामर्श अनुसार थाइरोक्सिन वा थाइरोनम नामक औषधीको सेवनद्वारा यो रोगको निवारण हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको रोजाईमा कसरी परे व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ ?
पसिनाको दुर्गन्धले हैरान हुनुहुन्छ, यसरी कम गर्नुहोस्